School's 'digital' revolution | Digital Revolution in Nepal- TechPana Tech News Nepal
२०७८, ९ मंसिर बिहिबार |
परिवर्तन भए एनसेलका शर्ट कोड, यस्ता छन् नयाँ
तपाईंले आफ्नो ई-मेल सिग्नेचर राख्नै पर्ने ५ कारण
टेलिकमका सिममा ग्लोबल आइएमईको मोबाइल एपलाई निःशुल्क इन्टरनेट
के तपाईंलाई थाहा छ किन बनाइएको थियो बिटक्वाइन
फोटो पारखीका लागि सामसङले ल्यायो एड्भान्स फिचर भएको
जापानी कम्पनीले सार्वजनिक गर्‍यो आईफोनभन्दा महँगो फोन, यस्तो
टेलिकमले ल्यायो 'प्याकेज एक, फाइदा अनेक' अफर
टेलिकममा खुल्यो २७० जनाको जागिर, यसरी दिनुहोस् अनलाइन
आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो
विद्यालयको ‘डिजिटल’ क्रान्ति
शनिबार, फाल्गुन २४, २०७६
काठमाडौं । घरबाट हिडेँका छोरीछोरी विद्यालय पुग्ने वित्तिकै हाजिरीको नोटिफिकेसन अभिभावक मोबाइलमा आउँछ । छुट्टी भएर घर फर्कदाँ कुन रुटको कुन गल्लीमा आइपुगे भन्ने ट्रयाक गरेर हेर्नसकिने । हराएका शैक्षिक कागजातहरु आफ्नै ह्याण्डसेटमा सुरक्षित हुने ।
विद्यार्थीको सम्पूर्ण शैक्षिक विवरण तथा प्रमाणपत्रमा विद्यालय प्रशासन सरह नै विद्यार्थीको पनि पहुँच हुन्छ । बुवा आमालाई छोराछोरीको हरेक क्रियाकलापको पूर्ण जानकारी हुने । विद्यालयलाई पनि विद्यार्थी, व्यवस्थापन र शिक्षक कर्मचारीको पूर्ण जानकारी रहने ।
सोच्नुहोस् त, यस्तो प्रणालीले हाम्रो परम्परागत शैक्षिक वातावरणमा कस्तो क्रान्ति ल्याउला ?
शिक्षा क्षेत्रमा यस्तै परिवर्तन ल्याउन इन्जिनियर आदित्य राज र उनको टोलीले विगत पाँच वर्षदेखि शैक्षिक व्यवस्थापन प्रविधिमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको छ । आदित्यको यो टोलीले डिजिटल नेपाल नामक संस्थाबाट शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्नुका साथै खोज तथा अन्वेषण गरिरहेको छ ।
२०१४ मा इन्जिनियर कोर्ष पुरा गरिसकेपछि सबइन्जिनियरको रुपमा दर्ता हुन नेपाल इन्जिनियरिङ परीषद् पुग्दा आदित्यलाई संकट आइलाग्यो । उनलाई विद्यालय तहदेखिका प्रमाणपत्रहरु मागिएको थियो । तर उनीसँग थिएन ।
पाँच सात वर्षको अन्तरालमा जब उनी आफू पढेको विद्यालय पुगे, विद्यालय व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा उनका सबै शैक्षिक विवरण नामेट भइसकेका रहेछन् । फसाद त त्यतिखेर पर्‍यो, जब उनलाई नयाँ विद्यालय व्यवस्थापनले त्यस विद्यालयको भूतपूर्व विद्यार्थी भनेर चिन्ने कुनै आधार समेत बाँकी थिएन ।
त्यतिखेरै हो उनको मनमा प्रश्न उब्जिकएको, यस्ता समस्या दैनिक कति विद्यार्थीले भोग्नुपर्दो हो । त्यसो त बैंकिङ, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रहरु प्रविधिमैत्री भइरहेका छन् । तर सबै क्षेत्रका लागि जनशक्ति तयार पार्ने शिक्षा क्षेत्र नै प्रविधिको मूलधारबाट अलग्गिएको उनलाई चित्त बुझेन ।
यी र यस्तै भोगाई र सोचाईले उनी शैक्षिक क्षेत्रको यो समस्यालाई समाधान गर्न कस्सिए र एक्लो प्रयासमा सुरु गरे डिजिटल नेपालको यात्रा । यात्रा सुरु गरेको दुई वर्षसम्म कम्पनीको अस्तित्व धरमर अवस्थाबाटै गुज्रियो । २०१८ मा डिजिटल नेपाल कम्पनीको अवधारणा र भिजन थप स्पष्ट र बलियो बनाउन, उनी लगायत पाँच जनाको कोर टिम थप गृहकार्यमा जुट्यो ।
अहिले कम्पनीमा २५ जनाको टिम तयार भएको छ । सेवा काठमाडौं लगायत सातै प्रदेशका ५ सयभन्दा धेरै विद्यालयहरुमा प्रयोगमा छ । पाँचथर जस्तो पहाडी जिल्लादेखि तराईका एकदमै अकल्पनीय रुपमा पछाडि रहेका विद्यालयमा पनि पुगेको आदित्य सुनाउँछन् ।
आदित्य र उनको टिमले सुरु गरेको यो सफ्टवेयर सोलुसनले विद्यार्थी, विद्यालय, व्यवस्थापन, शिक्षक र अभिभावकबीचकाे सूचनाको अभावलाई मेट्दै गएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन, दैनिक प्रशासनिक तथा विद्यार्थी अभिभावकको कामलाई पनि सहज बनाइिदएको छ ।
अब डिजिटल नेपालको सेवा प्रयोग गरिरहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्र हराएको खण्डमा वा विद्यालयमा डेटा नपाएर आफ्नो शैक्षिक योग्यताको आधिकारिकता गुमाउनु पर्ने डरमा बाँच्नु नपर्ने सुनिश्चित रहेको आदित्यको दाबी छ ।
डिजिटल नेपाल मिदास वा स्मार्टर जस्तो अनलाइन कोर्ष वा पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउने सोलुसन भने होइन । यो एउटा प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली हो ।
शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलबाट आईसीटी अवार्ड थाप्दै
विद्यालय प्रशासनलाई आवश्यक कर्मचारीको हाजिरी, कर्मचारीको पेरोल, ट्याक्स, डक्युमेन्टेसन, कर्मचारीको प्रोफाइलिङ, अकाउन्टिङ, इन्भेन्ट्रिहरु यही प्रणालीमा अटाएका छन् । होस्टेल, क्यान्टिन, यातायात, लाइब्रेरी, स्कूल बिलिङ, विभिन्न विभागका सबैका कामकाजलाई यो सफ्टवेयर तथा एपले अटोमेसन गराएको छ ।
कागजरहीत रुपमा सबै काम सम्पन्न हुन्छन् । पहिला जस्तो फाइल बोकेर कुद्न पियन चाहिँदैन । परीक्षा व्यवस्थापनदेखि प्राप्ताङ्क लेजरमा चढाएर विद्यार्थी तथा अभिभावकको पहुँचसम्म एपबाटै अनलाइन पठाइन्छ । अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबीच आर्थिक लेनदेन गर्न अनलाइन पेमेन्ट गेटवे इन्टिग्रेट गरिएको छ ।
‘शैक्षिक प्रणाली व्यवस्थापनका लागि हाम्रो जस्ता अरु कम्पनीहरु पनि बजारमा छन्,’ आदित्य भन्छन्, ‘तर हाम्रो सेवा आपूर्तिको तीब्रता, बजारको मागअनुसार सेवामा ल्याइरहेको सुधार र खोज तथा अन्वेषणले हाम्रो सेवा विशेष किसिमको छ ।’
यसका लागि डिजिटल नेपालले चार किसिमका एपहरु तयार गरेको छ । जसमा विद्यालय व्यवथापन, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका लागि छुट्टा छुट्टै एप बनाइएको छ । सबै किसिमका प्रयोगकर्तालाई युजरनेम र पासवर्ड दिइन्छ । जसबाट उनीहरुले आफ्नो सरोकारको विषयमा पकड राख्न सक्छन् ।
कम्पनीको सेवाले विद्यालयहरुलाई कागजरहीत बनाउन मात्रै होइन काममा समेत तीब्रता ल्याएको छ । यस्ता प्रणाली इन्स्टल गर्ने विद्यालयहरुको खर्च दश प्रतिशतले घटाएको छ ।
यो एप अफलाइन र अनलाई दुबै किसिमले प्रयोग गर्न मिल्छ । जसले गर्दा देशको जुनसकुै कुनामा पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीको मूख्य आम्दानीको स्रोत नै यही सफ्टवेयर बनेको छ । अहिले कम्पनीले सबै स्कूलमा प्रति विद्यार्थी सय रुपैयाको दरले शूल्क लिइरहेको छ । विभिन्न कस्टमाइज प्याकेजका लागि थप शूल्क लाग्छ ।
हाल कम्पनीको वार्षिक आम्दानी एककरोड रुपैयाँ रहेको आदित्य बताउँछन् । तर खर्च पनि त्यसै अनुसार हुने भएकाले कम्पनी नाफामा गइ नसकेको उनको भनाई छ ।
कम्पनीले कूल आयको ठूलो हिस्सा अझै पनि सेवालाई थप गुणस्तरिय बनाउन अध्ययन तथा अन्वेषणमा नै लगानी गरिरहेको छ । आगामी दिनमा सेवालाई सेवाग्राहीको रुची र आवश्यकता अनुसार सुधार तथा परिस्कृत गर्दै लैजाने योजनामा कम्पनी छ ।
चार महिनामै नेपाल भित्रिए २० अर्ब बढीका मोबाइल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चार महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको
तपाईंले आफ्नो ई-मेल सिग्नेचर राख्नै पर्ने ५ कारण (तरिका सहित)
काठमाडौं । धेरैजसो समयमा हामीले ई-मेल सिग्नेचर (ई-मेलको अन्तिममा हुने व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विवरण) खासै
अन्ततः घट्ने भयो मोबाइल कलको शुल्क, नियामकले दियो यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल कलको शुल्क कम गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको
परिवर्तन भए एनसेलका शर्ट कोड, यस्ता छन् नयाँ नम्बर
काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने शर्टकट कोड
टेलिकमले ल्यायो ‘प्याकेज एक, फाइदा अनेक’ अफर
जापानी कम्पनीले सार्वजनिक गर्‍यो आईफोनभन्दा महँगो फोन, यस्तो छ विशेषता
टेलिकममा खुल्यो २७० जनाको जागिर, यसरी दिनुहोस् अनलाइन आवेदन
लामो दूरीमा पनि गुड्न थाले विद्युतीय बस, के सस्तो होला त भाडादर ?
ह्वावे एप ग्यालरीमा उपलब्ध गेमिङ एपबाट लाखौं एन्ड्रोइड डिभाइस भित्रियो मालवेयर
साओमीलाई लाग्यो चिप अभावको झट्का, बजारमा धकेलियो एक स्थान पछाडि
ट्रुकलरका मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता ३० करोड माथि
औषधी ठानेर एक महिलाले एयरपड निलेपछि…
के तपाईंलाई थाहा छ किन बनाइएको थियो बिटक्वाइन ?